Okwamanje strollers Convertible zithandwa kakhulu. Abazali edonsela kubo ithuba ukushintsha isikhundla nomumo ngokuhambisana inkathi. Ngo ezinamasondo enjalo ingane kungaba sihlale siphapheme sishaywa umoya noma ukulala kamnandi. Uma uthi nhlá, ukuhamba lezi onobuhle kubonakale kancane krupnovat, kodwa kunezimo eziningana ezisivunayo obungenakuphikwa.
Stroller-transformer enemisebenzi: lokhu kungaba kokubili imbeleko futhi isihlalo. Bayoba nomuzwa izingane ukhululekile kusuka ekuzalweni kuya eminyakeni emithathu. onobuhle ezinjalo mncane futhi ulula kunalokhu onobuhle ejwayelekile. Ziyakwazi esibalulekile - ikhono ukwakheka. Lena Ukugunda kakhulu uma udinga ukuya esitolo noma izithuthi zomphakathi.
Transformers anemisila ezihlukahlukene izingxenye edingekayo. Ngokwesibonelo, beya, footrest obulungisekayo noma hood ezinkulu esivikela emvuleni nomoya. Ngaphezu kwalokho, kukhona capes futhi heater, ngakho-ke, stroller Convertible kufanele kube esihle ehamba phezu idolobha ebusika.
Ngemuva kwalesi imodeli enezinto eziningi engeli ukuthambekela. Kuyinto elula kakhulu lapho ehamba. Manje zonke namakalishi kuleli kilasi abe emihlanu-phuzu ukuphepha amahanisi. elula kakhulu isibambo emuva. Ingane ingase ukugibela ebhekene emgwaqweni noma umama - eqinisweni kwenzeka ukuthi kusukela ekuphumeni kwelanga okugqamile akunakwenzeka ukufihla ngisho ne visor. Stroller-transformer bheka yesimanje futhi stylish njalo.
Ngo-1947 e-Germany Teutonia inkampani yasungulwa abazalwane Gustav futhi Agasti Lüdeking, ogama Isiqubulo kwakubhalwe la mazwi - lingafani futhi kangcono. Iminyaka 60, inkampani ukhiqiza onobuhle kuphela izingane. Kuyinto inkampani ehamba phambili e-Europe kulo mkhakha. Teutonia - inkampani kuphela enikeza iwaranti engu-3. Teutonia strollers kukhona abasizi kubazali ukusithatha ukukhathazeka eziningi nsuku zonke. Kungakhathaliseki ukuthi iyiphi imodeli ukhetha, ukuthola isethi egcwele izesekeli.
Stroller-transformer Teutonia lwathandeka. Ngenxa indlwana ephathekayo, stroller ezemidlalo kweso iphenduka ibe ingane, okuyinto ekahle kakhulu izinsana. Minyaka yonke inikeza iqoqo elisha Teutonia strollers, ngokuvumelana izitayela fashion. ukuphelela Ezinhle nokucabangela ngokuningiliziwe, ukuthembeka, kuhambisana nentuthuko yakamuva embonini wenzé amamodeli we strollers ziphelelwe isikhathi nendawo.
Polish stroller transformer Adamex futhi bazibonakalisa beyizisebenzi kakhulu endleleni expanses Russian. Inkampani ukwenza ngaphandle ukukhiqizwa ingane strollers-Transformers ngempumelelo. Impendulo evela kumakhasimende yalezi namakalishi ine maneuverability esihle futhi omuhle ukushaqeka ukumuncwa. Ngokukhethekile ikhokhelwa ekuphepheni kuzo.
Ukuvikelwa Side lihambisana ezibanzi emihlanu-phuzu amahanisi, aqede ngokuphelele kungenzeka ukulahlekelwa ingane ikalishi, futhi izimpahla ezisetshenziselwa ukukhiqiza yayo, kukhona hypoallergenic. Amakalishi wale nkampani abe design zanamuhla futhi ubeke izinto ngononina futhi anhlobonhlobo imibala ayegcwele. Abazali phawula ukuthi ngalinye lalawa namakalishi kalula ukumelana kuze iminyaka 4 ukusetshenziswa nsuku zonke, sibe izinga ezinhle Yakha. Pram isibambo ikhava olubunjiwe iraba, okwenza kungabi ngokuphelele ukushelela.